‘डन’ दीपक मनाङेको सत्तारोहण, कति दिन टिक्ला पद ? | eAdarsha.com
‘डन’ दीपक मनाङेको सत्तारोहण, कति दिन टिक्ला पद ?
पोखरा । कांग्रेस, राप्रपा हुँदै स्वतन्त्र बनेर एमालेको समर्थनमा मनाङबाट प्रत्यक्ष निर्वाचन जितेका प्रदेशसभा सांसद राजीव गुरुङ उर्फ दीपक मनाङे गण्डकी प्रदेशको मन्त्री बनेका छन् । उनी एक समय लक्ष्मण चौधरीको संघीय समाजवादी पार्टीमा पनि प्रवेश गरेका थिए । २०७४ मा मनाङ (ख) बाट उम्मेद्वारी दिएका मनाङेलाई जिताउन एमालेले आफ्नै आधिकारिक उम्मेदवारलाई फिर्ता बोलाएको थियो । एमालेकै बलमा चुनाव जिते पनि उनले पुरानो मुद्दाको किनारा नलागेका कारण सुरुमा सांसदको सपथ लिन पाएनन् ।
मन्त्री पद १० दिनमा पनि जान सक्छ । मलाई मन्त्री ठूलो कुरा होइन । सांसद त छँदै छु नि
मुद्दा बाँकी नै रहँदा २०७५ माघ १४ गते एमालेका केन्द्रीय नेता र मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङकै जोडबलमा उनलाई सांसदको सपथ गराइएको थियो । २०७६ को असारमा उनी तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) प्रवेश गरे । त्यही आधारमा गुरुङ सरकारलाई उनले समर्थन दिएका थिए । तर त्यसको औपचारिक रेकर्ड अहिलेसम्म पनि प्रदेशसभा सचिवालयमा छैन । यही पुसमा नेकपा फुटेर एमाले–माओवादीको कित्ता छुट्टिएपछि उनी कुनै पनि पार्टीमा टाँसिएनन् ।
केही समय वामदेव गौतम समूहतिर ढल्किएका उनी विस्तारै स्वतन्त्र बन्ने बाटोमा लागे । उनले वैशाख १३ गते आफू स्वतन्त्र रहेको भन्दै संसद भवनमा छुट्टै कुर्ची मागे । सचिवालयले त्यसको प्रबन्ध मिलायो । भोलिपल्ट नेकपाको खातामा आफ्नो नामबाट गएको लेबी समेत फिर्ता मागे । त्यो निवेदनसमेत दर्ता भएर सचिवालयले प्रक्रियामा लगेको छ ।
अहिले उनले पूर्ण रुपमा पार्टी राजनीतिबाट पारपाचुके गरिसकेका छन् । सत्ता जोगाउने ध्यानमा रहेको गण्डकी सरकारले आफ्नो पार्टीबाट सम्बन्ध विच्छेद गरेका उनै सांसदलाई मन्त्री उपहार दिएको छ । मुख्यमन्त्रीविरुद्ध विपक्षी गठबन्धनले अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेपछि उनी नयाँ सरकारलाई सघाउने बताउँदै आएका थिए । आफू मनाङी जनताको विकासका लागि निर्वाचित भएको भन्दै कुनै पार्टीतिर नलागी सरकार पक्षधर हुने उनको तर्क थियो । पछि राष्ट्रिय जनमोर्चाले समर्थन गरेको समूहलाई आफूले मतदान गर्ने बताए ।
यही बीचमा अविश्वास प्रस्तावमाथि छलफल चल्दै थियो । बुधबार प्रस्तावमा मतदान हुँदै थियो । मनाङे एकाएक गायव भए । संसद बैठककै लागि मंगलबार साँझ उनले पिसिआर परीक्षणका लागि स्वाव समेत दिएका हुन् । अविश्वास प्रस्तावमा अलिखित समर्थन गरेको जनमोर्चाका १ सांसद बिरामी बनेको बहानामा संसद छलेपछि प्रस्तावमा मतदान भएन ।
बुधबार मोबाइल अफ गरेर हराएका उनी बिहीबार मन्त्रीको सपथका लागि दौरा सुरुवाल र कोटमा झुल्किए ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयले रेखदेख गर्दै आएको युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय फुटाएर गुरुङको जिम्मा लगाइएको हो । उनलाई प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले सपथ गराएका छन् । पदभार ग्रहण गरेपछि उनले खेलकुद र रोजगारीलाई सँगै लैजाने प्रतिवद्धता जनाए । ‘खेलाडीलाई खेलाएर मात्रै हुँदैन । डाइट राम्रो भयो भने मात्रै राम्रो नतिजा आउछ,’ उनले भने, ‘मैले खेलाडीको रिटायर्डमेन्ट प्याकेज पनि सोचेको छु । जति पनि खेलाडी हुनुहुन्छ उहाँहरुलाई कृषिमा जोड्ने योजना छ ।’ युवा र खेलाडीलाई विदेश जानबाट रोक्न आफूले कम्मर कसेर काम गर्ने उनले सुनाए ।
‘धेरै जग्गाहरु सरकारी नाममा छ । त्यो खाली जग्गामा राम्रो कार्यक्रम गर्न सके कोही पनि बाहिर जानु पर्दैन । कृषिबाट पनि उनीहरु यहिँ रहन सक्छन्,’ मनाङेले भने, ‘सरकारी जग्गा नांगो बसिरहेको छ, त्यसलाई प्रयोग गर्छु । अरु मन्त्रालयसँग पनि कोअर्डिनेसन गरेर मात्रै मेरो योजना पूरा हुनसक्छ । त्यसैले हरेक हप्ता बैठक बस्नुपर्छ भनेर मुख्यमन्त्रीलाईस ल्लाह दिइसकेको छु ।’ कृषिसँगै जडिबुटी उत्पादन र निकासीमा पनि युवालाई जोड्ने उनको योजना छ । ‘जडिबुटीको मार्केट थाहा छैन । जुन जडिबुटीको मार्केट छ त्यहि रोपौं,’ उनले अघि थपे, ‘नेपालबाट कच्चा पदार्थ बढी बिक्री हुन्छ । प्रशोधन गरेर बेचौं । पैसा धेरै आउँछ ।’
नवनियुक्त मन्त्री मनाङेले मन्त्रालय नफुटाएसम्म नतिजा राम्रो नआउने भन्दै विभाजन गर्न सरकारलाई सुझाएका छन् । ‘७ वटा मन्त्रीले २० वटा मन्त्रालय चलाउन सक्दैन । मसँग भएको दुईवटा हात र दुईवटा खुट्टा हो । मैले कति चलाउन सक्छु ?,’ उनी भन्छन्, ‘मन्त्रालय बाँढौं । बल्ल राम्रो काम हुन्छ ।’
उनले सबै खेलका विज्ञलाई बोलाएर उनीहरुको राय सल्लाहमै कार्यक्रम बनाउने बताएका छन् । मनाङेले सरकार जुनसुकै बेला जान सक्ने भन्दै बसुन्जेल राम्रो काम गरेर देखाउने बाचा गरे । ‘१० दिनमा पनि जान सक्छ । मलाई मन्त्री ठूलो कुरा होइन । सांसद त छँदै छु नि,’ उनी भन्छन्, ‘म केही काम गरेर देखाईदिन्छु । समय एकदम कम छ । यो सरकार जुनसुकै बेला जान सक्छ । राम्रो नीति बनाइदिन्छु । पछि आउनेलाई पनि काम गर्न सजिलो हुन्छ । नयाँ मन्त्रीले त्यसलाई फलो गर्छ ।’ उनले अझै पनि कसको पक्षमा भोट हाल्ने भन्ने निर्णय सुनाउन सकेनन् । ‘मलाई चुनावमा उहाँहरुले सहयोग गरेको हो । त्यसलाई मैले बिर्सिन हुँदैन । मनाङबाट धेरै फोन पनि आयो । १ पटक उहाँले भनेको मानें र नाइँ भनिनँ,’ उनी भन्छन्, ‘म राजनीति गरेर खानुपर्छ भन्ने मान्यता राख्दिनँ । राजनीति हो । धेरै भन्न हुँदैन । अस्ति मैले जनमोर्चाले भोट हालेपछि हाल्छु भनेको हो । उहाँहरु आउनुभएन । म स्ट्यान्डमा थिएँ ।’ काठमाडौंको रिसले पोखरामा राम्रो चलिरहेको सरकार विरुद्ध लाग्नु राम्रो नभएको उनको तर्क छ । माओवादी र एमालेले आफ्नै देशका नेतालाई छोडेर विदेशी नेतालाई पुजेकोले घिन लागेर पार्टीमा आवद्ध नभएको उनले सुनाए ।
नवनियुक्त मन्त्री मनाङे जहिल्यै चर्चामा आइरहने व्यक्ति हुन् । विगतमा उनको गुण्डागर्दी देखि संसदीय निर्वाचन हुँदै सपथ ग्रहणदेखि मन्त्री बन्दासम्मका धेरै किस्सा छन् । कर्तव्य ज्यान मुद्दा टुंगो नलागेको भन्दै उनलाई सुरुमा सपथ नै गराइएन । १ वर्षपछि सपथ लिएका मनाङे संसदको अर्थ विकास समितिको सदस्य बने । समितिले राम्रो काम नगरेको आरोप लगाएर राजीनामा दिए । उनले सार्वजनिक ठाउँमा एन्फा कास्की अध्यक्ष मिलन गुरुङलाई हिर्काए । मिलनले मुद्दा हालेपछि उनी केही समय हिरासत समेत बसे । उनै मनाङे अहिले मन्त्री बनेका छन् । २०५०÷५१ देखि नै उनी आपराधिक गतिविधिमा संलग्न थिए । पटक पटक पक्राउ पर्ने र छुट्ने उनको दिनचर्या जस्तै थियो । उनलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको आरोपमा मुद्दा समेत चलाएको थियो । उनले त्यहाँबाट भने सफाइ पाए । पर्यटन व्यवसाय, ठेक्का पट्टा हुँदै उनी राजनीतिमा निरन्तर लागिरहे ।